I-China i-Lady Classic Cuff yeegusha zeSlipper mveliso kunye nabathengisi | Yiruihe
ILady Classic yeCuff Sheepskin Slipper
Isibini esifudumeleyo nesitofotofo seSlipper Slipper kufuneka senziwe ngenene yi-Australia kwinqanaba leGusha; kwaye ikhafu yesikhumba segusha iya kwenza unyawo luzive lonwabile; Sebenzisa i-EVA ukwenza i-outsole iyakwenza ukukhanya kube lula kwaye kulula ukuhamba.
Phezulu: Inkomo iSuede
Cuff: Isikhumba segusha
Ikhefu kunye nelining kunye ne-insole yenziwe kwinqanaba le-Sheepskin yase-Australia.
Indawo esebenzayo: Ngaphaya ngaphakathi nangaphandle
I-slippers yesikhumba semvu esineenenekazi zakudala bezikunye nathi kwasekuqaleni kwaye ziyintandokazi yokwenene kubathengi!
Isiliphu isitayile esithandwayo esityibilikayo esinomda omncinci ngaphambili, islippers sinee-seams zokuhombisa ngaphezulu kunye nemivimbo yelaphu ejikeleze iinyawo.
Zenziwe ngofele lwegusha olubutofotofo, zinee-soels ezomeleleyo ezomeleleyo kwaye ziyafumaneka ngemibala yakudala unyaka wonke.
Xa ufika ekhaya emva komsebenzi onzima wosuku kwaye iinyawo zakho zisongelwe ngezihlangu ezishushu ezinje ngezi, uziva ukhululekile.
Uyilo olukhethekileyo lwekhofu loboya lwenza iislippers kube lula kakhulu ukuba zinxitywe kwaye lwenza iinyawo ziziva zigude kakhulu.
Okukuphela kwayo kwenziwa ngezinto ze-EVA, ezenza ukuba uzive ulula xa uhamba. Kwangelo xesha, ikwanokunxiba okungahambelaniyo.Xa uhamba kumgangatho wakho okhuni, ngekhe wenze ingxolo kwaye uvuse wonke umntu.
Ubuhle besikhumba segusha kukuba uphefumla ngokwendalo kwaye uyanceda ukugcina iinyawo zakho zinganuki kwaye zimanzi, ukuze ukwazi ukunxiba iziliphu unyaka wonke kwaye uzive ukhululekile.
Indlela yakudala yokuyila iimeyile, zonke ezomeleleyo kunye nezintofontofo ezinzulu zesikhumba segusha, iqinisekisa ukufudumala okungaphezulu nokuba uhamba ngaphakathi okanye ngaphandle kwaye awuzukuziva uxanduva. Ngezihlangu ezinjalo, andizukuziva ndibanda kobu busika.
Egqithileyo Umbala oMnyama oMnyama oVulekileyo weZwane weSlipper
Okulandelayo: Inenekazi elinemibala evaliweyo iinzwane zeegusha
Umntwana Cuff mishini zangaphakathi
I-Lady Sheepskin Slipper ene-PVC yodwa
Inenekazi ezimbini zeBelt Sheepkin Slipper
Abafazi beMyuzi yeeGusha zeSlipper kunye ne-EVA yodwa